Shirar amniga ah oo lagu qabtey Sanaag
20 Nov 20, 2012 - 5:24:15 AM
Deegaano ka mid ah Gobolka Sanaag ayaa dhowaanahan waxa ka dhacayey shirar looga hadlayey xoojinta iyo adkeynta amaanka,waxana ka qaybgalay nabadoonada ,isimadda ,haweenka iyo dhalinyarada.
Gudoomiyaha Gobolka Sanaag Maxamed Ismaaciil Ciyoon oo la hadlay Radio Garowe ayaa sheegey in kulamada ay la qaateen shacabka kala hadleen sidii ay iskaga kaashan lahaayeen xoojinta nabadgelyada deegaanadooda.
Gudoomiyuhu waxa uu dhowaan sheegey inuu safaro ku marey magaalooyin ka tirsan gobolka islamarkaasina dadweynaha uu ku booriyey inay ilaashadaan nabada iyo xasiloonida kana hortagaan cid kasta oo amaanka wax u dhimeysa.
Nidaamka Axsaabta badan ee Puntland u guurtey ayuu xusey Maxamed Ciyoon in bulshada ku dhaqan gobolka diyaar u yihiin ayna soo dhoweynayaan in laga gudbo habkii wax ku qaybsiga Qabiilka.
Guud ahaan deegaanada Puntland ayaa waxa isi soo taraya taageerada loo muujinayo hanaanka siyaasadeed ee Dowladu ku talaabsatey,waxana bog cusub la filayaa in axsaabtu u furto siyaasada Puntland.
Halkan ka dhageyso Cawil Cali oo wareysanaya Gudoomiyaha Sanaag